Bu'aa hawata turistiirraa argamu guddisuun dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudha
Bu'aa hawata turistiirraa argamu guddisuun dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudha Featured
Beeladoota Paarkii Gaarren Biyyaalessaa Baaleetti argaman keessaa
Itoophiyaan qabeenya hawata turistii uumamaafi namtolcheetiin kan badhaate taatus bu'aan damecharraa argamaa jirtu gahaa miti. Kanaafuu iddoowwan hawata turistii misoomsuu, eeguu, kunuunsuufi beeksisuun dhimma xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetamuu qabuudha.
Ministeerri Aadaafi Turizimii Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa waliin ta'uun qabeenya hawata turistii misoomsuufi beeksisuudhaan bu'aa damecharraa argamu guddisuuf waliin hojjechaa jiraachuu sagantaa daaw'annaa bakkeewwan hawata turistii torban kana Godina Baalee, Magaalaa Gobbaatti adeemsifamerratti ibsuusaanii Burqaan Oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Sagantichi mataduree “Qabeenya turizimii keenya haa beeknu, itti haafayyadamnu” jedhuun kan qophaa'e yoo ta'u, namootni naannolee biyyattii keessaa walitti baba'aniifi dubartoonni damee turizimii irratti bobba'an bakkeewwan hawata turistii Oromiyaa Godinaalee Arsii Lixaafi Baaleetti argaman daaw'ataniiru. Kaayyoon daaw'annichaa iddoowwan hawata turistii beeksisuufi bu'aa damecharraa argamu guddisuuf akka ta'e himu bakka buutuun Ministeera Aadaafi Tuurizimii, Aadde Waynisheet Waldamaariyam.
Iddoowwan hawata turistii ta'an misoomsuu, eeguu, kunuunsuufi beeksisuun bu'aan bu'aa damecharra argamu guddisuun guddina dinagdee biyyaa si'eessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kanaafuu dubartoonni damee turizimiirratti bobba'an bakkeewwan hawata turistii biyyattii beekuu, beeksisuu, rakkoolee iddoowwan hawattoota turistiitti mul'atan furuufi misoomsuufi akkasumas carraawwan hojii naannawa sanatti argaman adda baasuurratti hirmaachuundhaan guddina dinagdee biyyattii si'eessuu keessatti gahee irraa eegamu bahachuu akka qaban yaadachiisu Aadde Waynisheet.
Sagantaan daaw'annichaa iddoowwan hawata turistii uumamaafi namtolchee naannichaa beeksisuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhu bakka buutuun Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa Aadde Waaqtolee Galataa.
Ittigaafatamtuu Ittaantuun Waajjira Aadaafi Tuurizimii Godina Baalee, Aadde Mardiiyaa Ahmad gama isaaniitiin akka jedhanitti, gudinichi hawattoota turistii uumamaafi namtolchee hedduu kan qabu ta'us galiin damecharraa argamaa jiru garuu xiqqaadha. Bu'uuraaleen misoomaa guutamuu dhabuun, hawwattoota duuristii sirriitti beeksisuu dhabuun rakkoolee guguddoo damecharratti mul'atan ta'uu himu.
Biiroo Aadaafi Tuurizimii naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa kan dhufan Aadde Iikiraam Abdurashiid akka jedhanitti, sagantaa daaw'annichaatiin bineensota Paarkii Biyyoolessaa Baalee keessatti argaman dhiyeenyatti arguu danda'aniiru. Bu'aaleen hojii harkaa dubartoonni gurmaa'anii paarkicha keessatti hojjetanis jajjabeeffamuu kan qabuufi akka muuxannoo gaariitti fudhatamuu kan qabu ta'uu himu.
Biiroo Aadaafi Turizimee Magaalaa Dirre Dawaarraa kan dhufan Aadde Kadiraa Alii akka jedhanitti, sagantichi hawattoota turistii godinaalee Arsii Lixaafi Baalee keessatti argaman adda addaa akka daaw'ataniif carraa gaarii uumeeraaf. Leenjii hubannoo gabbisuu sirna daawwannichaa irratti kennameenis dhimoota waa'ee tuurizimiin walqabatan irratti hubannoo gahaa kan argatan ta'uu dubbatu.
Walumaagalatti, bakkeewwan hawattoota turistii naannolees ta'e biyyattii misoomsuu, eeguu, kunuunsuufi beeksisuun akkasumas hanqina bu'uraalee misoomaa damicharratti mul'atan furuun guddina dinagdee biyyattii deggaruu keessatti gahee olaanaa qaba.
Kanaafuu qaamoleen damee kanarratti hojjetaniifi hawaasni naannawaa gahee isaanirra eegamu bahachuuf yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan hojjechuutu irraa eegama.
Torban kana/This_Week 9639
Guyyaa mara/All_Days 1819059